laacib » “Cid kasta oo garoonka joogta ayaa arki kartay inay rigoore ahayd.”. tababaraha Man City Pellegrini oo weeraray garsoore Roger East
“Cid kasta oo garoonka joogta ayaa arki kartay inay rigoore ahayd.”. tababaraha Man City Pellegrini oo weeraray garsoore Roger East
(Manchester) 14 Jan 2016. Tababaraha laacibkii Man City Manuel Pellegrini ayaa sheegay in dhammaan dadyowgii daawanayay ciyaartii Etihad Stadium ee Man City iyo Everton ay arki kareen rigooradii laga diiday Raheem Sterling.
City ayaa bar-baro 0-0 kala kulantay Everton xalay iyadoona lumisay dhibco muhiim ah tartanka hogaanka Premier League inkastoo ay jirtay inay inta badan xukumeysay ciyaarta, Daafaca birta ee Stones ayaa jilaafeeyay Sterling dhamaadka daqiiqadihii lagu daray ciyaarta.
“Qofkasta oo joogay garoonka wuu arki karay rigoorada, aad ayay ugu dhaweyd garsooraha aad ayayna u caddeyd,” Pellegrini ayaa sidaa u sheegay saxaafadda kulanka kaddib.
“Labada lug ee Raheem Sterling waxaa qaatay Stones laakiin haddii seeriga la yeerin waxba maka dhihi karno. Ma doonayo inaan ka sii hadlo tallaabooyinka shaqsi ee kulanka.
“Garsooruhu waa inuu go’aansadaa, waxaan bixiyay aragtideeda ku aadan guud ahaan bandhiga iyo go’aankaas waxaynu sameynay wax nagu filan si aan ugu guuleysano kulanka, gaar ahaan qeybtii labaad ee ciyaarta.
“Waxaa laga yaabaa inuu ahaa kulan mid isku dhow qeybtii hore ee ciyaarta fursado yar laakiin qeybtii labad, innaga ayaa xukumeynay kubbad heysashada, laadadka, waxaan u maleynayaa inaan sameynay wax nagu filan si aan u guuleysano kulanka, waxaynu u qalannay wax ka badan bar-baro.”.